Galmudug oo War Murtiyeed ka soo saartay dilka Gudoomiyihii gobalka Galgaduud
August 5, 2017 - Written by Editor
Cadaado:-innaa Lillaahi wa inaa ileyhi Raajicuun, Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Galmudug, Madxweyne kuxigeenka Galmudug iyo labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug , waxay tacsi tiiraanya leh u dirayaan qoyskii, qaraabadii iyo dhamaan shacabka dowlad goboleeedka Galmudug oo ay ka geeriyooday Allaha ha u naxariistee gudoomiyihiin Gobolka Galgaduud marxuum Maxamed dahir Shiikh Cali Cilmi iyo walalkiis marxuum En. Xasan Shiikh Cali Cilmi oo xalay kooxo hubeysan oo dhagar qabayaal ah ay ku dileen magaalada muqdisho,gaar ahaan xafada Carafaad waxaana dishay gacan ka xaqdaran, runtii geerida ku timid gudoomiyaha iyo walalkiisba waa mid si gaar ah noo taabaneysa.
“Innaa Lillaahi wa Inaa Ileyhi Raajicuun. Dhammaan Dowlad Goboleedka Galmudug waxay tacsida iyo tiiraanyo la wadaagayaan ilaahna uga barya yaan qoyskii, eheladii iyo dhammaan dadka reer Galmudug oo ay kabaxeen labada marxuum in ilaah samir iyo iimaan ka siiyo iyagana raxariistiisa Janno ka waraabiyo.
Ugu danbeyntii dowlad goboleedka Galmudug waxa ay ugu baaqeysaa dowlada federaalka ee soomaaliya in ay baaritaan ku sameyso soona qabtaan dadkii ka danbeeyay dilkii xalay loo geystay gudoomiyihii gobolka galgaduud iyo walal kiis isla markaana Cadaalada la horkeeno.
Xafiiska Madaxweynaha Galmudug